Dhageyso:-Xildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Mooshin Ka Diyaarinaya Shariif Xasan. – Hornafrik Media Network
Dhageyso:-Xildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Mooshin Ka Diyaarinaya Shariif Xasan.
Shalay Magaaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa mudo kadib dib ugu soo laabtay Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo si aan horay loo arag loo soo dhaweeyay balse waxaa barbar socda xildhibaanada Maamulkaas qaarkood oo dhaliilsan Siyaasadiisa.
Xildhibaan Dubad Maxamed Dhaqane oo ka mid ah Xubnaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in Shariif Xasan uusan wax u qaban dadka dega deegaanada Koonfur Galbeed marka laga reebo in uu kursigiisa ilaashaday sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in Shariifka uu jebiyay Dastuurka Koonfur Galbeed islamarkaana uu qaatay go’aan aan loo dirsan oo u ula jeeday mowqifka uu ka qaatay khilaafka Wadamada Khaliijka.
Isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in Shacabka qaarkood ay u geeriyoodeen abaar iyo sidoo kale in deegaano badan oo ka tirsan koonfur Galbeed lala wareegay.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in 16 Bishan uu furmi doono kulanka Baarlamanka kaas oo ay go’aan kaga gaari doonaan Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
Halkan ka dhagayso Xildhibaan Dubad.
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay dhiggiisa Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir
Dhagayso: Golaha Wasiirada oo xil ka qaadis ku sameeyay Xisaabiyihii Guud ee Qaranka